Cusbooneysii ikhtiyaaraadka fasaxa ee Macaamiisha Cuntooyinka Ku-Shaagalaha iyo iskaa wax u qabso
Cusbooneysiinta xulashooyinka fasaxa ee Cunnada macaamiisha iyo mutadawiciinta
Iyada oo ciidaha ay si dhakhso leh u soo dhowaanayaan, waa wakhti ku habboon in dib loo eego dhawr fursadood oo ay heli karaan kuwa u baahan cuntooyinka fasaxa iyo kuwa danaynaya tabaruca inta lagu jiro fasaxyada.
Sababtoo ah in qaar badan oo ka mid ah macaamiisheennu ay fasaxyada la qaataan qoyskooda - iyo Cunnooyinka Wheels-ka xubnaha ka shaqeeya waxay ku raaxaystaan waqti la qaadashada qoysaskooda - inbadan oo ka mid ah barnaamijyadeena barnaamijyadu waa xiran yihiin Kirismaska iyo Sannadka Cusub. Barnaamijyada badankood sidoo kale waxay bixiyaan cunno qabow oo la gaarsiiyo maalmaha ay xirnaan doonaan. Macaamiisha hadda jira iyo tabaruceyaashu waxay ka hubin karaan goobahooda barnaamijyada qorshooyinka ciidaha haddii ay su'aalo qabaan.
Waxaan sidoo kale soo saarnaa dhowr su'aalood oo naga socda kuwa raadinaya inay helaan cunno ama mutadawiciin gaar ahaan Kirismaska. Waxaa jira dhowr barnaamij oo ku hareeraysan Magaalooyinka Mataanaha ah oo bixiya cunnooyinka fasaxa gaarka ah.
Kuwa qaata cuntada iyo tabaruceyaasha:
VEAP (Tabaruceyaal u qoran inay Caawiyaan Dadka): 952-888-9616, https://veap.org/get-help/veap-programs/ Barnaamijka Cuntada Fasaxu wuxuu geeya cunnooyin kulul, oo ay ugu deeqaan makhaayadaha maxalliga ah iyo jameecooyinka, oo loogu talogalay dadka waaweyn ee guryahooda ku xidhan, kuwa dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dakhligoodu go'an yahay iyo dadka waaweyn ee naafada ah Maalinta Kirismaska. Gaarsiintaan ma aha oo kaliya inay bixiyaan cunto kulul fasaxa, laakiin sidoo kale booqasho saaxiibtinimo. Fiiro gaar ah: Diiwaangelintu waxay dhammaanaysaa Dec. 18.
Howlgalka Midowga Injiilka: 651-292-1721, www.ugmstpaul.orgUnion Gospel Mission waxay u adeegtaa cunno beeleed maalinta Ciidda Masiixiga iyadoo ku taal Xarunteeda Ragga, 435 University Avenue East, Saint Paul.
Loogu talagalay mutadawiciinta:
Walaalaha Yaryar, Saaxiibada Waayeelka: 612-746-0726, www.littlebrothersmn.orgMutadawiciin ayaa loo baahan yahay si ay u siiyaan cunnooyinka Maalinta Kirismaska kuwa hadda ka qaybgalaya barnaamijyada Walaalaha Yar Yar, Saaxiibbada Barnaamijyada Waayeelka. Barnaamijka gaarsiinta cuntada wuxuu ka shaqeeyaa kaniisada Bethel Lutheran, 4120 17th Ave. S., Minneapolis. Mutadawiciinta xiisaha leh waxay wici karaan 612-746-0726 ama emayl [email protected].
Dhammaanteen annaga oo ka mid ah Cuntada Lugaha Lugta, waxaan rajeyneynaa inaad leedahay xilli fasax wanaagsan!
Diisambar 12, 2013